Dagaalyahano Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamo isugu jira Mareykan iyo Soomaali… – Hagaag.com
Dagaalyahano Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamo isugu jira Mareykan iyo Soomaali…
Posted on 8 Juunyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsan Al Shabaab ayaa maanta weerar xoogan waxa ay ku qaadeen ciidamo isugu jira Mareykan iyo Soomaali oo ku sugnaa duleedka magaalada Kismaayo.
Weerarka Al Shabaab ku qaadeen ciidamada huwanta ah ayaa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni oo dhaca duleedka Kismaayo , waxaana Al Shabaab weerarkan u adeegsadeen qaraxyo iyo hub kale oo culus.
Dagaal xoogan ayaa dhax maray ciidamada la weeraray iyo dagaalyahanada Al Shabaab, waxaa lasoo sheegayaa in dagaalkaasi ay ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo kala gaaray.
Al Shabaab ayaa war ay baraha Internetka ku faafisay ku sheegtay in ciidamada huwanta ah weerarkaasi ku gaarsiiyeen khasaaro xoogan, waxa ayna Al Shabaab xuseen in dhaawacyo iyo meydad lagu qaaday diyaarado Helicopter ah.
Maamulka Jubbaland ayaan wali ka hadlin weerarkan lagu qaaday Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kumaandooska Soomaaliya, waxaana weerarkan uu imaanayaa xili ciidamada maamulka Jubbaland howlgalo ka wadeen duleedka Kismaayo.